एउटा स्याउ दैनिक खाँदा हुन्छ यी लाभ - IAUA
एउटा स्याउ दैनिक खाँदा हुन्छ यी लाभ
ramkrishna January 3, 2018	benefits of appleएउटा स्याउ दैनिक खाँदा हुन्छ यी लाभ
स्याउमा भिटामिन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेशियम, फस्फोरस। आइरन प्रोटिन लगायतका विभिन्न पोषक तत्वह? पाईन्छन् । जसले हामीलाई डायविटिज, क्यान्सर लगायत विभिन्न रोगबाट बचाउने क्षमता राख्छ ।
अनिन्द्राको समस्या छ भने सुत्नु भन्दा अगाडि एकदाना स्याउ र मनतातो दुध पिउदा मस्त निन्द्रा लाग्छ ।
तौल सन्तुलित राख्छ
धेरै तौलका कारण हुने हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेय जस्ता रोगहरुबाट छुट्कारा मिल्छ । स्याउमा प्रर्याप्त मात्रामा हुने फाइबरले तौल कम गर्न सहयोग गर्छ ।
आँखाको ज्योति कमजोर हुनेले खानासँगै हरेक दिन एउटा स्याउ खानुपर्छ ।
मुहार सुन्दर बनाउँछ
स्याउको नियमित सेवनले तपाईको अनुहारमा भएका कालो धव्वाह? पनि हराएर जान्छ र अनुहार सुन्दर देखिन्छ ।
यसले पेटमा ग्यास जम्मा हुन दिँदैन र पेटका किरा पनि नाश गर्छ । दुई ओटा स्याउ व एक गिलास ताजा जुस पिउँदा पेटको किरा मर्नुका साथै कब्जियत पनि भगाउछ । कब्जियत भएकाले दिनहु खाली पेट स्याउ खाँदा कब्जियत निको हुनको साथै भोक बढाउँछ ।
पत्थरीका बिरामीका लागि स्याउ औषधी नै साबित भएको छ । बिरामीले हरेक दिन चार देख पाँच ओटा स्याउ खाँदा निको हुन्छ ।
मधुमेह अर्थात चिनी रोग लाग्ने सम्भावना कम गर्छ। मुटुलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ। बिहान उठ्नेवित्तिकै स्याउ खाँदा राम्रो हुने स्वास्थ्य विज्ञहरुको भनाई छ।
क्यान्सरको खतरा हटाउँछ
दाँत मजबुत बनाउँछ
तपाईले ब्रस गर्दा पनि दाँत चम्किलो हुँदैन भने तपाई दैनिक स्याउ मजाले चपाएर खानुहोस, दाँतमा चमक आउने छ । यसका साथै स्याउले मुखको व्याक्टेरिया समेत हटाउँछ र दाँतलाई मजबुत बनाउँछ ।
Previous Previous post: यी ९ गल्ती जसले कलेजो खराब गर्छ
Next Next post: पेट भरिएको बेला पनि भोक लाग्छ ? यस्ता समस्या हुन सक्छन्